Imakethe yamasheya, ukuhwebelana kwamasheya namuhla
Ukucaphuna kwamasheya ezinkampanini ezingu-71229 ngesikhathi sangempela.
Ukucaphuna kwamasheya ku-inthanethi
Umlando ucaphuna umlando
I-capital market capital
Inzuzo evela kumasheya enkampani
Amanani wokulinganisa wezinkampani. Kukuphi ukutshalwa imali?
Inani le-Stock kusuka emhlabeni jikelele. Ideshibhodi yakho siqu ngamanani, izingcaphuno zamasheya, amashadi wamanani wamasheya nokukhishwa kwamabhizinisi avela emhlabeni wonke.
Umsindo Izingcaphuno ze-Stock Amashadi e-inthanethi Umlando wezindleko I-Capitalization Izihlukaniso Inzuzo Inzuzo Ukulinganisa
Ihora Usuku Iviki Inyanga izinyanga 3 Unyaka Iminyaka emithathu
Imali ye-Stock exchange USD - US dollar EUR - Euro GBP - okokuphrinta JPY - Yen CNY - yuan RUB - Ruble Russian AUD - Aussie dollar AZN - Manat Azerbaijani ALL - Lek Albanian DZD - Dinar Algeria XCD - Dollar East Caribbean AOA - Kwanza MOP - Pataca Macanese ARS - Peso Argentine AMD - Dram-Armenian AWG - Florin UmAruba AFN - Afghani Afghan BSD - Dollar Bahamian BDT - Bangladesh Taka BBD - Barbados dollar BHD - Bahrain dinar BYR - Ruble Belarusian BYN - Ruble Belarusian BZD - Belize dollar XOF - CFC franc BMD - Bermuda dollar BGN - Lev Bulgarian BOB - Boliviano saseBolivia BAM - Bosnia and Herzegovina uphawu convertible BWP - Botswana Pula BRL - Brazilian real BND - Brunei dollar SGD - Singapore dollar BIF - Burundi franc BTN - Bhutan Ngultrum INR - Rupee Indian VUV - Vanuatu Vatu HUF - Forint Hungarian VEF - WaseVenezuela Bolivar fuerte VND - Vietnamesse dong XAF - CFC franc HTG - Gourde Haitian GYD - Guyana dollar GMD - Gambian dalasi GHS - Ghana Cedi GTQ - Quetzal laseGuatemala GNF - Guinea franc - - Guernsey ganda GIP - Gibraltar ganda HKD - Hong Kong dollar HNL - Hondura Lempira GEL - Lari Georgian DKK - Umqhele Danish DJF - Djibouti franc DOP - Dominican peso EGP - Ganda Egyptian ZMW - Zambian Kwacha MAD - Dirham Moroccan ZWD - Dollar Zimbabwean ILS - Israeli yeshekeli entsha IDR - URupiah Indonesian JOD - Jordan dinar IQD - Iraqi Dinar IRR - Rial Iranian ISK - Iceland krone YER - Rial Yemeni CVE - Cape Verde Escudo KZT - Kazakhstani Tenge KYD - Cayman Islands dollar KHR - Riel Cambodian CAD - Dollar Canadian QAR - Riyal Qatari KES - Kenya usheleni COP - Peso Colombian KMF - Franc Comoran CDF - Franc Congolese KPW - North Won Korean KRW - Won South Korean RSD - Dinar Serbian CRC - Costa Rica colon CUP - Peso Cuban KWD - Dinar Kuwaiti NZD - New Zealand dollar KGS - Som Kyrgyzstani LAK - Lao Kip LVL - Latvian lat LSL - Lilangeni ZAR - Rand LRD - Liberia dollar LBP - Ganda Lebanese LYD - Dinar waseLibya LTL - Litas Lithuanian CHF - Franc Swiss MUR - Mauritius Rupee MRO - Ouguiya Mauritanian MGA - Ariary Malagasy MKD - Denar Macedonian MWK - Malawi Kwacha MYR - Malaysin Ringgit MVR - Rufiyana Maldivian MXN - Peso Mexican MZN - Metical waseMozambique MDL - Leu baseMoldova MNT - Tugrik-Mongolian MMK - Kyat Burmese NAD - Dollar Namibian NPR - Rupee Nepalese NGN - Naira Nigerian ANG - Gulden Antilliaanse NIO - Cordoba baseNicaragua XPF - French Pacific franc NOK - Krone Norwegian AED - UAE Dirham OMR - Rial Omani SHP - Saint Helena ganda PKR - Pakistan Rupee PAB - Balboa Panamanian PGK - kina PYG - Guarani PEN - Peruvian Nuevo Sol PLN - Zloty Polish RWF - Franc baseRwanda RON - Leu Romanian XDR - SDR (Special drawing amalungelo) SVC - Ikholoni El Salvador WST - Tala STD - São Tomé and Príncipe Dobra SAR - Riyal Saudi SZL - Lilangeni TRY - New Turkish lira SCR - Seychelles Rupee SYP - Ganda Syrian SKK - Slovak koruna SBD - Solomon Islands dollar SOS - Usheleni waseSomali SDG - Ganda Sudanese SRD - NaseSurinam dollar SLL - Leone TJS - Somoni Tajikistani THB - Baht Thai TWD - Dollar entsha Taiwan TZS - Usheleni Tanzanian TOP - pa`anga TTD - Trinidad and Tobago dollar TND - Dinar Tunisian TMM - Turkmenistan manat TMT - Turkmenistan manat entsha UGX - Uganda usheleni UZS - Uzbekistan sum UAH - hryvnia UYU - Peso Uruguay FJD - Fiji dollar PHP - Philippines peso FKP - Falkland Islands ganda HRK - Kuna Croatian CZK - Koruna Czech CLP - Peso Chilean SEK - Krona Swedish LKR - Sri Lanka Rupee ERN - Nakfa ETB - Ethiopian Birr JMD - Dollar Jamaican SSP - Ganda South Sudanese BTC - Bitcoin CLF - BaseChile Unidad de Fomento EEK - Kroon Estonian GGP - Guernsey ganda IMP - Manx ganda JEP - Jersey ganda MTL - Lira Maltese XAG - 1 troy amamilimitha zesiliva XAU - 1 troy amamilimitha egolide (igolide electronic / igolide electronic) ZMK - Zambian Kwacha ZWL - IZimbabwe dollar ATS - Usheleni Austrian AON - Angolan Kwanza entsha BEF - Franc Belgian GRD - Lwesiliva Greek IEP - Ganda Irish ESP - Peseta Spanish ITL - Lire Italian CYP - Cyprus ganda DEM - Deutsche mark NLG - Netherlands Guilder PTE - Escudo Portuguese SIT - Tolar Slovenian SRG - NaseSurinam Guilder FIM - Uphawu Fin FRF - France frank ECU - ECU YUM - Yugoslavian dinar entsha
Njalo imizuzu emihlanu Njalo imizuzu engu-15 Njalo ihora
Bonisa: intengo namuhla ishadi lentengo ikhabethe lemakethe ishadi lemakethe yamakethe umthamo wokuhweba umthamo weshadi lokuhweba
AAPL = 364.11
ushintsho lwezinga lokushintshaniswa kusukela
Apple Inc. umlando wesilinganiso samasheya
Apple Inc. ikhanda lemakethe
1 578 172 809 216
+147 193 856 000 (+10.29%)
ukuguqulwa kwezindleko kusukela
Shumeka le widget kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi.
GOOG = 1 464.70
Alphabet Inc. umlando wesilinganiso samasheya
Alphabet Inc. ikhanda lemakethe
1 001 230 827 520
+17 642 094 592 (+1.79%)
MSFT = 206.26
Microsoft Corporation umlando wesilinganiso samasheya
Microsoft Corporation ikhanda lemakethe
1 564 160 294 912
+135 743 537 152 (+9.50%)
AMZN = 2 878.70
Amazon.com, Inc. umlando wesilinganiso samasheya
Amazon.com, Inc. ikhanda lemakethe
1 441 612 300 288
+196 343 234 560 (+15.77%)
FB = 233.42
Facebook, Inc. umlando wesilinganiso samasheya
Facebook, Inc. ikhanda lemakethe
665 036 914 688
+8 575 778 816 (+1.31%)
Ukucaphuna kwamasheya emhlabeni jikelele, inani lamasheya ezinkampani kusuka kuzo zonke izimakethe zamasheya, konke ukuhwebelana kwamasheya namuhla.
Ukucaphuna kwamasheya ngesikhathi sangempela, izintengo zamasheya ku-intanethi kuzo zonke izingxoxo zezohwebo zomhlaba. Izindleko zamasheya ezinkampani namuhla.
Idatha yemlando ngokubaluleka kwamasheya ezinkampani ezivela emhlabeni jikelele.
Zonke izinkampani ezinomnotho wazo nezokuhweba emakethe yamasheya namuhla.
Zonke izinkampani ezinezikhwama zentengo yazo kanye nezindleko zokukhokha.
Imibiko yezezimali ngenzuzo nokulahlekelwa kwezinkampani emhlabeni jikelele.
Yakha iphothifoliyo yakho yokutshalwa kwezimali ngokwemigomo obheka njengokubalulekile.
I-Allstockstoday.com iyireferensi yemakethe yesitoko ebanzi kunazo zonke emhlabeni.
Sibonisa ngesikhathi sangempela izinkomba ezinjalo zezinkampani zemakethe yomhlaba:
Amanani esitoko wezinkampani emhlabeni wonke online
Intengo yesitoko yangempela yenkampani
Ishadi lentengo yamasheya enkampani emakethe yesitoko
I-capitalization yezinkampani namuhla
Ukwehlukaniswa kwamasheya ezinkampani zezikhathi zokubika zokugcina
Umlando wezingcaphuno zesitoko zezinkampani
Income yezinkampani ngezikhathi emakethe yesitoko
Isilinganiso sezinkampani ezinenzuzo kakhulu nezizuzisa kakhulu
Lapho ungatshala khona imali, isibalo semali engenayo ephezulu online
Insiza ngayinye isebenza mahhala nangesikhathi sangempela.
Yonke imininingwane ithathwa emithonjeni evulekile futhi iqoqwe yizinhlelo zethu kumasevisi alula we-inthanethi.
Izingcaphuno zesitoko se-Intanethi zezinkampani emhlabeni wonke ziyinsizakalo enkulu yesiza. Ibonisa inani lesitoko senkampani ngayinye yanamuhla. Ungabona inani lesitoko cishe kunoma iyiphi inkampani. Ukuya kwensizakalo yezilinganiso zesitoko, chofoza lapha:
Intengo yesitoko yangempela
Inani lamasheya enkampani ngesikhathi sangempela noma intengo yesitoko yenkampani noma intengo yesitoko yezinkampani iqoqwa kusukela ekuhwebeni kwangempela kokushintshaniswa emhlabeni wonke futhi kuboniswa kuwebhusayithi yethu.
Intengo yesitoko yezinkampani ishintsha nsuku zonke, futhi ungahlala uyibona intengo yesitoko yenkampani namuhla at allstockstoday.com
Ishadi lentengo yemasheya yenkampani
Ishadi lentengo yemasheya yenkampani - ukumelwa okucacisiwe kwentengo yesitoko yenkampani yanamuhla nomlando wezintengo zamasheya ezentengo ezikuyi-Intanethi yanoma iyiphi inkampani emhlabeni ongayibona isevisi:
I-capitalization yezinkampani namuhla - inani eliphelele lamasheya enkampani namuhla.
I-capitalization yanoma iyiphi inkampani iyashintsha nsuku zonke, njengoba kusho inani lamasheya ayo. Ukufakwa kwemali kwezinkampani kuthinteka futhi ngenani lezabelo kule nkampani, ezingashintsha noma nini.
Insizakalo yethu ye-inthanethi ikhombisa ukufakwa kwemali kwenkampani ngayinye emhlabeni. Ukuze uyisebenzise, ​​chofoza kusixhumanisi:
Ukwehlukaniswa kwamasheya ezinkampani zezikhathi zokubika kungenye yezinto ezibalulekile ezithinta inzuzo yesabelo, inani lenzuzo evela ngokutshala imali kubatshalizimali kule sabelo.
Ukuhlukaniswa kwamasheya imininingwane etholakala esidlangalaleni futhi isikhathi ngasinye sokubika senzelwe inkampani ngayinye.
Ungabuka usayizi wezabelo zokwabelana zenkampani ngayinye esikhathini sokubika sokugcina, kanye nezinye izikhathi zokubika kusigaba sethu, esibizwa ngokuthi:
Umlando wezingcaphuno zesitoko
Umlando wezilinganiso zesitoko zezinkampani zezikhathi ezahlukahlukene utholakala online kumasevisi wethu. Ngakho-ke ungabona mahhala:
umlando wezingcaphuno zesitoko ezinkampanini ngosuku
umlando wesonto wesitoko
umlando wesitoko senyanga wezinkampani
umlando wezingcaphuno zesitoko senkampani sonyaka
Ukubuka umlando wamanani esitoko senkampani ngayinye, sebenzisa ilinki:
Inzuzo yezinkampani namuhla - inani lenzuzo esemthethweni elisemthethweni ngezitatimende zezezimali zakamuva zenkampani. Kuwebhusayithi yethu awukwazi ukubona kuphela inani lenzuzo yenkampani yanamuhla, kodwa futhi ubone inzuzo yenkampani ezinye izikhathi zokubika.
Inzuzo yenkampani iyisici esithinta kakhulu inkambo kanye nenani lesitoko sekusasa.
Insizakalo "yenkampani" itholakala ku:
Inzuzo yezinkampani ngezikhathi emakethe yesitoko
Imali etholwa emakethe yesikhathi ngasinye ulwazi olubalulekile ngentengo yesitoko. Inani lesabelo noma intengo yalo ngezinga elikhulu inquma imali yenkampani yezikhathi ezihlukile zokubika.
Ngaphansi kwemali engenayo yokumba namuhla qondisisa imali engenayo yenkampani yesikhathi sokubika sokugcina.
Lapha ungabona imali etholwa yizinkampani njenganamuhla, kanye nomlando wokuhola kwemali yenkampani ngokwemibiko edlule.
Insiza "Imali Yenkampani" itholakala lapha:
Isimo sezinkampani ezinenzuzo kakhulu nezizuzisa kakhulu zihlanganiswa ngokuzenzakalela ngokuya ngezilinganiso zesitoko ezivela emhlabeni wonke.
Ukulinganiswa kwesitoko se-intanethi kungenye yezinsizakalo ezibaluleke kakhulu kubatshalizimali emhlabeni jikelele. Ukulinganiswa kwezinkampani ezinenzuzo kuyashintsha nsuku zonke. Akuyona imfihlo ukuthi imali enenzuzo kakhulu yenziwe ngokuqondile ezinkampanini ezizuzisa kakhulu.
Unethuba lokubona mahhala izilinganiso zezinkampani ezizuzisa kakhulu emhlabeni enkonzeni yethu:
Lapho ungatshala khona imali, i-inthanethi yokubala engenayo ephezulu iyisevisi yokuzenzela indawo esizenzela ngayo. Ungakhetha izici ezahlukahlukene zezinkampani ukuthi uqonde ukuthi ungtshale imali kuphi:
ushintsho entengo yamasheya enkampani
izinzuzo: imvamisa nenani lezinkokhelo
izinkomba zezimali ezinjengenzuzo, inzuzo, inani lezimpahla
Unquma ukuthi uyitshale kuphi imali, kepha insizakalo yethu izokusiza ekukhetheni inani elincane lezinkampani ezinenzuzo kakhulu zokutshala imali kusuka kumashumi ezinkulungwane zabanye.